Ndị egwuregwu bọọlụ
agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Ntinye ego na ahia ahia
Mmelite ụmụ akwụkwọ
Kedu ihe bụ ego dijitalụ?
N'isiokwu a, anyị ga-amụ ihe niile gbasara isiokwu "gịnị bụ ego dijitalụ?". Ọzọkwa, anyị ga-ekwu maka pụtara ego dijitalụ, teknụzụ blockchain, Bitcoin, ego fiat, cryptocurrencies, wdg. Nke a bụ ụdị ego na-abụghị anụ ahụ. Ọ na-abụkarị n'ụdị dijitalụ. Pụtara nke ndị ọrụ ego dijitalụ nwere ike iji… GỤKWUO
Categories Cryptocurrency, agụmakwụkwọ football / Soccer Academy, Ntinye ego na ahia ahia
Crypto na itinye ego dị elu nke mmụta mmụta ego n'ọgbọ niile
Na webụsaịtị a, anyị ga-ekwurịta banyere Crypto na itinye ego dị elu nke mmụta mmụta ego n'ọgbọ niile Ọtụtụ ndị okenye US na-aghọta cryptocurrency na ọkwa mmalite. Ịkwado na ọkwa ndụ bụ akwụkwọ ọgụgụ ego achọrọ n'agbanyeghị ọnwa ọgụgụ isi ego na Eprel a, Investopedia jụrụ ndị okenye US 4,000 1,000 nke ọ bụla sitere na Generation Z (18-25), puku afọ (26-41), na… GỤKWUO
Kedu ihe bụ Crowdfunding?
N'isiokwu a, anyị ga-amụ "gịnị bụ ìgwè mmadụ?", "ụdị nke ìgwè mmadụ", "Kickstarter Crowdfunding", "GoFundMe", "investment" "," ụlọ ọrụ ", wdg Okwu Mmalite To Crowd ego Site aha, ị ga-enweta. echiche nke ihe igwe mmadụ ego bụ ihe niile gbasara. Ejikọtara ya na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị mmadụ. Agbanyeghị, igwe mmadụ bụ ụzọ, ndị na-akpakọrịta ego na-enweta ego… GỤKWUO
Categories agụmakwụkwọ football / Soccer Academy, Ntinye ego na ahia ahia
Kedu ihe bụ Scraping Data?
Site na mgbe ị rutere na njedebe nke post a "Gịnị bụ Data Scraping?", ị gaara amụtala ihe niile gbasara ncha data. Nke a gụnyere: otu esi ehichapụ data na teknụzụ akpaghị aka, iwe ihe ubi email, akụkụ ọjọọ nke nchịkọta data, ọdịnihu nke nchịkọta data na ọtụtụ ndị ọzọ. Na-ehichapụ data sitere na webụsaịtị n'ime akwụkwọ akụkọ,… GỤKWUO
Oke maka ntinye aka IRA
Ị na-eru afọ ezumike nka na ị na-achọ nkwado ezumike nka kwesịrị ekwesị. Lelee ọdịnaya a. Ntụnye aka na nhazi ezumike nka onye ọ bụla (IRA). Oke maka ntinye aka IRA. Ụdị IRA. Oke na mwepu IRA ọdịnala na 2021 na 2022. Pụtara nke Nhazi ezumike nka onye ọ bụla (IRA) onyinye ọdịnala, Roth, ma ọ bụ ụdị onyinye IRA ọzọ… GỤKWUO
Gịnị bụ Cross-Border Trading?
Ibe a bụ n'ezie maka: Gịnị bụ Cross-Border Trading? Ka ịre ahịa oke oke si arụ ọrụ. Ịzụ ahịa gafere oke. Na-emewanye nkwado mpaghara. Uru ma ọ bụ ọnụ ahịa dị iche / Arbitrage Cross-Border Trading: Nkọwapụta "Ịzụ ahịa gafere oke na-enye gị ohere ịzụ ahịa n'ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ karịa ndị asọmpi mpaghara na ego. Ọ na-enyekwa gị ohere ịzụ ahịa dị iche iche. "Ndị ọchụnta ego na-etinye aka na… GỤKWUO
Kedu ihe bụ Webụ Ọchịchịrị?
Na post a, “Gịnị bụ Weebụ gbara ọchịchịrị?”, ị ga-amụta maka webụ gbara ọchịchịrị, akụkọ ihe mere eme nke webụ gbara ọchịchịrị, webụ dị omimi na webụ gbara ọchịchịrị, otu esi enweta webụ gbara ọchịchịrị, ebe ahịa ojii na ọtụtụ ndị ọzọ gbasara incognito a. webụ. Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị bụ akụkụ ịntanetị nke igwe nchọta anaghị edepụta aha ya. Ha nwere ike ịbụ naanị… GỤKWUO
Kedu ihe bụ ihe ize ndụ kredit?
N'isiokwu a "Gịnị bụ ihe ize ndụ kredit? ", anyị ga-atụle ihe ize ndụ kredit pụtara, ntụnyere n'etiti ihe ize ndụ kredit na ọmụrụ nwa, ihe ndị a tụlere tupu abanye n'ihe ize ndụ kredit, ụlọ akụ na ụlọ ịgbazinye ego, ụdị nke ihe egwu kredit na ịba uru nke ọkwa kredit. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ n'otu n'otu na-agbaziri ego site na ụlọ ọrụ ịgbazinye ego, na-enweghị ike… GỤKWUO
Kedu ihe bụ Treasury Corp
Na ibe weebụ a, anyị ga na-atụle Gịnị bụ Ụlọọrụ Treasury? Ọ bụ ụlọ ọrụ hibere ijikwa, na ịchịkwa ihe egwu, ego, isi obodo, ihe nchekwa, na ọtụtụ ihe onwunwe iji gaa n'ikwekọ na usoro ya dị mkpirikpi na ogologo oge. Ọrụ nke Ụlọọrụ Treasury. Ọrụ nke ụlọ akụ ụlọ ọrụ. Nkọwa nke Akụ ụlọọrụ Ndị a bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka… GỤKWUO
Nkọwa nke Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
Anyị ga na-amụ nkọwa nke commodity futures trading Commission, pụtara commodity futures trading Commission, otú commodity futures trading Commission na-arụ ọrụ, ụkpụrụ nke CFTC, nhọrọ na ọdịnihu, Futures na swaps, commodity Exchange Act, wdg Na United States. Ndị ụlọ ọrụ na-achịkwa ahịa ndị na-emepụta ihe na gọọmentị etiti nke… GỤKWUO
Nkọwa nke Ndekọ ọnụ ahịa ndị ahịa (CPI)
Na ibe weebụ a, anyị ga na-akparịta ụka, Definition Of Consumer Price Index (CPI). Ọ bụ ụdị ndeksi ebe ọnụahịa nkata ngwaahịa na ọrụ na-agbaso echiche ahụ n'ime akụkụ ahịa a na-akpọ Index Ahịa Consumer (ma ọ bụ CPI). Kedu ka esi eji CPI? Onye na Gịnị na-ekpuchi CPI? Pụtara… GỤKWUO
Kedu ihe bụ nkwekọrịta maka ọdịiche (CFD)
Mmalite na (CFD) Mgbanwe ọnụ ahịa bụ ihe na-emetụta uru mgbe niile. Anyị nwere ike ịsị na nkwekọrịta maka ọdịiche (CFD) na-ekwu ihe onye na-azụ ahịa kwesịrị ime n'iche ọnụahịa ọ bụla. Ọdịiche ọnụahịa a bụ n'ihi mgbanwe nke uru bara uru. Ka anyị tụlee CFD Trading, ahịa ahịa na ịzụta ọnụahịa. … GỤKWUO
Kedu ihe bụ ụgwọ ọrụ mgbazinye ego (CMO)
Gụọ nke a nke ọma ka ịmatakwu gbasara: Gịnị bụ ọrụ ịgbazinye ego (CMO). Ihe Ị Kwesịrị Ịma Banyere CMO. Myirịta dị n'etiti CMO na CDO. Ntụnyere na CMO na MBS. Ọrụ ịgbazinye ego (CMO) bụ nchịkọta nke ọtụtụ mortgages achịkọtara ọnụ wee resị ndị ọchụnta ego. Ọ bụkwa ụdị… GỤKWUO
Kedu ihe bụ Iwu nzuzo nzuzo nke Bank (BSA)?
Na nke a post, Gịnị bụ The Bank Secret Act (BSA)?, anyị ga-amụta banyere Bank Secret Act (BSA), mkpa nke Bank nzuzo Act. Na kwa mgbe ị ga-ejupụta mkpesa mmemme enyo (SAR), fọm 8300. Na 1970, United States weputara iwu nzuzo nzuzo nke Bank (BSA) iji gbochie ndị omempụ izochi ma ọ bụ ịkwa akwa ha… GỤKWUO
Pụtara nke ụgwọ ọrụ akwadoro ụgwọ
Na post a Pụtara nke ụgwọ ụgwọ ụgwọ nkwekọrịta, anyị ga-eleba anya na ụgwọ ọrụ ụgwọ ọrụ nke nkwekọrịta (CDO), Usoro CDO, Ọdịdị nke CDO, na ọtụtụ ndị ọzọ na CDO A kwadoro ụgwọ ụgwọ (CDO) bụ ngwugwu nke mgbazinye ego na akụ rere ya na nnukwu. ụlọ ọrụ itinye ego na nnukwu ego. Drexel Burnham Lambert, onye bụbu itinye ego… GỤKWUO
Categories Cryptocurrency, Ajụjụ a na-ajụkarị - Ajụjụ, Ntinye ego na ahia ahia
Gịnị bụ uru ego pụtara
Na webụsaịtị a, anyị ga na-atụle Gịnị Bụ Pụtara Ofesi Isi Ego Ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ na-emefu n'ịgbatị ego ha nwetara na ego ole ọ na-enweta na uru bụ nke a na-akpọ Capital Efficiency. Mkpa ọrịre ego maka mmalite. Uru ịrụ ọrụ isi obodo Nkọwapụta nke arụmọrụ isi obodo N'ụzọ bụ isi, oke… GỤKWUO
Kedu ihe bụ ọnụ ahịa ọnụahịa
Na ibe weebụ a, anyị ga na-atụle Gịnị bụ Pụtara Ọnụ Ahịa. Akọwapụtara ọnụ ahịa nzụta dịka ego mmadụ dị njikere ịkwụ maka nchekwa, akụrụngwa, ngwa ahịa, ọrụ ma ọ bụ nkwekọrịta. Ọnụ ego ọnụahịa. Otu esi aghọta ọnụ ahịa ọnụahịa. Kedu ihe bụ Ọmụmaatụ nke nkọwa ọnụahịa ọnụahịa nke ọnụ ahịa ahịa… GỤKWUO
Kedu ihe bụ isi ego ego?
N'isiokwu a, anyị ga-atụle isiokwu bụ "Gịnị Bụ Isi Ego Ego Pụtara?", Ọzọkwa, anyị ga-ekwu maka "Mkpụrụ ego nke isi obodo pụtara", "Nleba anya nke ego isi obodo", "Ọnụ ego ego ego", "Ihe atụ nke isi ego”, wdg. Nlebanya Of Capital Funds Iji tụọ ike ụlọ ọrụ, a na-enyocha ụgwọ ya na nha nha nke ndị nwe ya. Ka ọ dị ugbu a, na… GỤKWUO
Nkọwa nke onye na-ejide akpa na Crypto na itinye ego
Na post a, anyị ga-ekwurịta isiokwu, "Nkọwa nke onye na-ejide akpa na crypto na itinye ego". Anyị ga-elebakwa anya n'ime, "Ònye bụ onye na-ejide akpa", "Gịnị na-emetụta ndị na-ejide akpa", "Mkpọnwụ na-adịghị na mmetụta mmetụta". A ga-atụle isiokwu ndị ọzọ dị mkpa dị ka "ọnụahịa dara ada" ka anyị na-aga n'ihu. Ọnye na-bụ akpa? … GỤKWUO
Nkọwa nke Bank for International Settlement (BIS)
Na ibe weebụ a, anyị ga-atụle nkọwa nke Bank for International Settlement (BIS). BIS bụ ụlọ ọrụ ego mba ụwa na-akwalite nkwụsi ike nke ego zuru ụwa ọnụ. Ebumnuche nke Bank maka ebe obibi mba ụwa. Innovation na Fintech Definition Of Bank for International Settlement (BIS) Ọ bụ otu mba ụwa nwere ebumnuche bụ isi nke ịkwalite ụwa… GỤKWUO
Nkọwa nke Onye Na-eme Ahịa Automated (AMM)
N'isiokwu a, isi ihe anyị lekwasịrị anya bụ nkọwa nke onye na-emepụta ahịa akpaaka (AMM). Otú ọ dị, anyị ga-elekwa anya n'ime pụtara liquidity ọdọ mmiri, liquidity na-enye, usoro maka mgbe nile ngwaahịa, iche iche nke akpaghị aka ahịa eme, impermanent ọnwụ, wdg Dị ka aha pụtara, ọ bụ ihe niile banyere iji akpaghị aka trading na-enye liquidity. Ọ… GỤKWUO
Nkọwapụta onye nnọchi anya akụ na ụba kwụụrụ onwe (AEA)
Nkọwa nke ndị ọrụ akụ na ụba kwụụrụ onwe ha, ihe AEA pụtara, usoro AEA, Framework kacha ọhụrụ ewepụtara na ọtụtụ ndị ọzọ. Onye ọrụ nwere ọgụgụ isi site na Fetch.ai na ntọala IOTA nke na-eme mkpebi n'aha onye nwe ya maka ebumnuche nke uru akụ na ụba, ma nweere onwe ya pụọ ​​​​na mmetụta mpụga. Onye nnọchi anya akụ na ụba kwụụrụ onwe (AEA) Ahaziri data ozugbo yana omume emere mgbe… GỤKWUO
Nkọwa nke Ọnụego Ego Edoro Ego nke abalị (SOFR)
N'ebe a, ị ga-ahụ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nkọwapụta nke oke ego ego abalị echekwara (SOFR). Nkọwa nke Ọnụego Ego Ego echekwabara n'abali (SOFR) Otu Ntụgharị nke ndabere ọnụego ego abalị echekwara echekwabara. Ọnụ ego ego n'abalị echekwara na ihe ndị ọzọ. Nkọwa nke SOFR (ọnụego ego ego abalị echekwara)? Nke a bụ ụkpụrụ maka… GỤKWUO
Nkọwa nke adịchaghị ihe egwu na itinye ego
Nke a bụ ụdị nkwụghachi ego nke a na-atụ anya na akụ ga-ewepụta karịa ọnụego nloghachi na-enweghị ihe egwu. Ọnụ ego ihe egwu nke akụrụngwa bụ naanị ụdị akwụ ụgwọ maka ndị na-etinye ego. Nkọwa nke adịchaghị ihe ize ndụ na itinye ego, ihe atụ nke adịchaghị ihe egwu, ngwa nke adịchaghị ihe egwu na ego. Ọ na-anọchi anya ugwo nye ndị na-etinye ego maka ịnakwere ihe egwu dị na ntinye ego enyere na nke ahụ… GỤKWUO
Categories Ntinye ego na ahia ahia
Gịnị bụ atụmatụ kacha mma maka ahịa anụ ọhịa bea?
Oge ahịa anụ ọhịa bea dị ize ndụ. N'isiokwu a, anyị ga-akọwapụta, kedu usoro kachasị mma maka ahịa anụ ọhịa bea, dịka ọmụmaatụ, na-achịkwa egwu gị, na-ewulite ọnụ ahịa ọnụ ahịa dollar, egwu egwu, dị iche iche na ihe ndị ọzọ. Ahịa anụ ọhịa bea na-ezo aka na nnukwu mbelata ọnụ ahịa akụrụngwa nke opekata mpe 20%… GỤKWUO
NKỌWA IHE EBE AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊAKWỤKWỌ(CMBS).
N'ime edemede a, a ga-eme ka nkọwapụta nke nchekwa na-akwado nnyefe azụmahịa (CMBS) yana otu o si arụ ọrụ, ụzọ nchekwa ego na-akwado nnyefe azụmahịa, ụdị CMBS, nkwughachi nke CMBS na iru eru maka CMBS ga-apụta ìhè. Ha bụ ngwaahịa itinye ego na-akpata ego nke ego mgbazinye ego na-akwado ụlọ ahịa kama ịbụ ezigbo ala na ụlọ. CMBS nwere ike inye ego n'ezie… GỤKWUO
Kedu ihe kacha mma na nke bara uru maka ezinụlọ ndị agha?
Ebumnuche nke isiokwu a, bụ ime ka ọ pụta ìhè; kedu ihe kacha mma na nke bara uru maka ezinụlọ ndị agha. Dị ka atụmatụ thrift Federal, Akaụntụ ezumike nka onye ọ bụla (IRAs), atụmatụ nchekwa kọleji 529, mmemme nkwụnye ego na ihe ndị ọzọ. Ọrụ agha anaghị enye ọtụtụ oge n'efu nke nwere ike ime ka onye otu nwee ike nyocha wee họrọ itinye ego kacha mma. Mana enwere… GỤKWUO
ỊDỊiche N'etiti AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊAKWỤKWỤKWỌ
N'isiokwu a, a ga-eme ka anyị dị iche iche n'etiti ngwaahịa na-ahọrọ na ngwaahịa nkịtị, nke a na-ahọrọ na ihe dị iche na ngwaahịa ndị a na-ahụkarị. Ngwaahịa ahọrọ na ngwaahịa nkịtị dị iche n'ọtụtụ ụzọ. Isi ihe dị iche bụ na ngwaahịa ọkacha mmasị anaghị enye ndị nwe oke ikike ịtụ vootu, ebe ngwaahịa nkịtị na-enye. Ndị ọchụnta ego… GỤKWUO
Nkọwa nke ụlọ mkpocha na ụlọ akụ na otu o si arụ ọrụ(Ihe atụ nke Clearinghouse)
Financial Clearinghouse bụ isiokwu dị mkpa n'ahịa ahịa ebe ọ bụ na ha na-eje ozi dị ka onye etiti. Site n'ịgụ akwụkwọ a, ọ bụghị nanị na ị ga-aghọta echiche nke ụlọ mkpochapụ ego kamakwa ị ga-amata ụdị ụlọ ọrụ ego dị ka; Ụlọ nchacha na-agbanwe ọdịnihu, yana ụlọ mkpocha ahịa ahịa. Anyị ga-atụlekwa na… GỤKWUO
Categories agụmakwụkwọ football / Soccer Academy, Ntinye ego na ahia ahia, Uncategorized
NKWUO NKE achụ ego isi obodo
N'isiokwu a, anyị ga-ejegharị gị site na, nkọwa nke isi ego, ụzọ isi ego na-arụ ọrụ, ihe ndị dị mkpa echiche na demerits nke isi obodo itinye ego. Enwere ike ịkọwa nke a dị ka ịnweta akụ anụ ahụ site n'aka ụlọ ọrụ maka iji na-akwalite ebumnobi na ebumnuche azụmahịa ya dị ogologo oge. Akụrụngwa azụrụ dị ka ntinye ego isi obodo gụnyere: Real Estate,… GỤKWUO
Nkọwa nke Mpụtara pasentị kwa afọ (APY)
Ị nwere mmasị ịmatakwu na pasentị Mịpụta Kwa Afọ? Hụ nkọwapụta nke mmụba pasentị kwa afọ (APY). Usoro maka APY. Ọdịiche dị n'etiti APY na APR. Ihe APY kwuru. Na ihe atụ nke APY. Were mpempe a dị ka ntuziaka. Ọnụego pasentị kwa afọ (APY) bụ ọnụego nloghachi na ntinye ego n'ime… GỤKWUO
Kedu usoro kachasị mma maka ahịa ehi
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ahịa ehi bụ; ahịa ehi na-ezo aka n'ọnọdụ nke ọnụ ahịa na-arị elu ma ọ bụ na-atụ anya ịrị elu n'ahịa ego. A na-ejikọta okwu ahụ "ahịa ehi" na ahịa ngwaahịa mana enwere ike itinye ya n'ọrụ na ihe ọ bụla a na-ere ahịa, gụnyere ezigbo ala na ụlọ, nkekọ, ego na ngwa ahịa. Kedu ihe bụ usoro kachasị mma maka ahịa ehi, atụmatụ nke ahịa ehi , Kedu ka ị ga-esi rite uru na ahịa ehi, Tụnyere n'etiti ahịa ehi na ahịa anụ ọhịa bea? … GỤKWUO
Kedu ihe bụ akụrụngwa kachasị mma maka ịkwalite mmuta ego
Kedu ihe ị chere bụ ụzọ kacha mma isi meziwanye mmuta ego gị? Ọbụlagodi na ị na-ebi na atụmatụ ịchebe ụtụ isi, usoro itinye ego n'ụzọ sara mbara, ma ọ bụ nwee oge siri ike ịmata ọdịiche dị na ETF site na HSA, ọ dị mkpa ka ị mụta ihe ndị bụ isi ma mara akụrụngwa ndị nwere ike inyere gị aka ịme mkpebi ego na ihe ọmụma kacha baa uru. Kedu ihe bụ akụrụngwa kachasị mma maka imeziwanye… GỤKWUO
Ọdịiche na nkọwa nke Akaụntụ Brokerage na IRA.
Enwere isi isiokwu anyị ga-elekwasị anya mgbe anyị na-atụle isiokwu: Ọdịiche na nkọwa nke Akaụntụ Brokerage na IRA. Isi isiokwu ndị a bụ Brokerage na IRA Overview, Pụtara Akaụntụ Brokerage, Gịnị bụ IRA, Ịtụ ụtụ nke Brokerage & Akaụntụ IR, Ụtụ Akaụntụ Brokerage, Taxes Akaụntụ IR, wdg Mgbe a bịara na… GỤKWUO
Kedu ihe kacha mma ndị na-ere ọla edo n'ịntanetị maka itinye ego ọla edo
N'ịgbaso mmụba n'ahịa ahịa ngwaahịa na ejighị n'aka ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọnụ ọgụgụ dị mma nke ndị na-etinye ego na-agbanwe ka ọ bụrụ ọla dị oke ọnụ ahịa dị ka ụzọ isi bulie pọtụfoliyo itinye ego ha. Karịsịa, Gold nọgidere na-aba uru ọbụna n'oge mgbanwe ahịa ngwaahịa dị ịrịba ama. E gosiputara na ọ bụ ogige dị irè megide onu oriri. Kedu ndị na-ere ọla edo kacha mma n'ịntanetị… GỤKWUO
Top Accounting Software Maka Ngwongwo Mgbazinye na Otu esi ahọpụta ngwa kacha mma iji jikwaa mgbazinye gị
Iji dobe ndekọ nke ihe ndị a kwa ụbọchị, nleba anya nnata, ịmepụta akụkọ, na ịkwadebe maka oge ụtụ isi n'ime nkeji kama awa (ma ọ bụ ụbọchị) abụrụla nke a na-enweta site na ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ maka ihe mgbazinye. Akụrụngwa Akaụntụ kacha elu Maka Ngwongwo mgbazinye yana Otu esi ahọpụta ngwa kacha mma iji jikwaa mgbazinye gị, What is Accounting Software for Rental… GỤKWUO
Kedu ihe dị iche n'etiti ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ na-ere ahịa
Maka ebumnuche dị iche iche, itinye ego na-adọta ụdị ndị ọchụnta ego dị iche iche mgbe niile. Ụdị ndị bụ isi nke ndị na-etinye ego bụ ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ na ndị na-ere ahịa. Kedu ihe dị iche n'etiti ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ na-ere ahịa, ndị bụ ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ? ndị na-ere ahịa investors? Ụdị nke ụlọ ọrụ ndị na-etinye ego na-atụnyere n'etiti ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ na-ere ahịa Otu ụlọ ọrụ na-etinye ego na ụlọ ọrụ ma ọ bụ òtù na ndị ọrụ na-etinye ego n'aha ndị ọzọ. (nke a, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ). Usoro nke onye na-etinye ego na ụlọ ọrụ na-ekenye isi obodo. Nke a ga-etinye ego na-adabere na ebumnuche ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ na-anọchi anya ya. Ụdị ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ ole na ole ama ama bụ ego ezumike nka, ụlọ akụ, ego otu, ego mkpuchi, onyinye, na ụlọ ọrụ inshọransị. Mgbe, ndị na-achụ ego na-ere ahịa na-agụnye ndị na-etinye ego nke ha, na-anọchite anya ha. N'ikwu eziokwu, ọdịiche dị mkpa dị n'etiti onye na-etinye ego na ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Na-adabere na ọnụego nke ahia ọ bụla. Ọnụ ego nke… GỤKWUO
Gịnị bụ Ọdịiche Dị n'etiti Ahịa Economy na Iwu Economy
Na oghere nke ọrụ akụ na ụba, Akụ na ụba Ahịa na Iwu Economy na-anọchi anya nnukwu akụ na ụba ahịa abụọ. Kedu ihe bụ akụ na ụba ahịa, Gịnị bụ akụ na ụba iwu, Kedu ihe dị iche n'etiti akụ na ụba ahịa na Iwu Economy? Ntụle n'etiti Economy Market na Iwu Economy Isi ọdịiche dị na ihe ndị na-emepụta na ... GỤKWUO
Otu esi etinye ego Index na uru ya
Naanị ebumnuche nke akụkọ a bụ ịduzi gị otu esi etinye ego na ntinye ego na uru ya. Ọ ga-eduzikwa gị na ihe ịma aka nke ego index, uru nke ego index, nkọwa nke index ego, nkenke bio nke Warren Buffett, wdg. Mgbe ị na-ekwurịta banyere itinye ego, e nwere ụfọdụ ndị na-… GỤKWUO
Ụzọ kacha mma iji tinye ego n'ịntanetị
Mgbe ị na-ede akụkọ a, anyị nwere olile anya na anyị ga-emetụta ihe ọmụma nke ụzọ kacha baa uru iji tinye ego n'ịntanetị nye gị. Ọzọkwa, nhọrọ nke onye na-ere ahịa n'ịntanetị, ụdị iwu a na-ahụkarị, nyocha ntinye ego n'ịntanetị, nyocha ihe abụọ. Ugbu a, ka anyị malite. N'oge ndị na-adịbeghị anya, enweela nnukwu usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị. Nke a na-eme ka ọ sie ike… GỤKWUO
Nkọwa nke Ọnụego Nlaghachi nke ime ime gbanwechara (MIRR) yana otu o si arụ ọrụ
Ghọtakwuo maka nkọwa MIRR, yana usoro maka ịgbakọ MIRR. Ka o si arụ ọrụ. Ihe MIRR nwere ikwu. Ọdịiche dị n'etiti MIRR na IRR. Kedu ihe ọnụego nlọghachi nke ime ime gbanwetụrụ pụtara? MIRR bụ ụdị ngbanwe nke ọnụego nkwụghachi n'ime (IRR), nke na-eme atụmatụ ntinye ntinye ego na akaụntụ maka… GỤKWUO
Kedu nkuzi kachasị mma maka itinye ego n'ụtụ isi?
Asambodo ịkwụ ụgwọ ụtụ bụ akụ nke ị nwetara akwụkwọ ikike nke na-akwụghachi ụtụ isi ụlọ agafeela na nkwụghachi maka ego, asambodo ịkwụ ụgwọ ụtụ bụ ụzọ dị egwu maka ndị na-etinye ego iji wepụta nsonaazụ ka mma na gburugburu ọmụrụ nwa dị ala, onye nkuzi nkuzi itinye ego ụtụ isi. gị ka usoro a si arụ ọrụ, kedu ihe na-eme itinye ego mara mma, yana… GỤKWUO
Nkọwa nke Ọnụego Pasent kwa afọ (APR) na Crypto
Kedu ihe bụ ọnụego pasentị kwa afọ (APR); Nke a bụ ego ọmụrụ nwa nke onye gbaziri agbaziri ga-akwụ kwa afọ. Ajụjụ bụ isi ebe a bụ ka esi agbakọ APR? anyị nwere ike ime ya site n'ịba ụba ọmụrụ nwa oge site na ọnụ ọgụgụ nke oge n'ime otu afọ nke ntinye ya. Ọnụego pasentị kwa afọ (APR) dị iche na kwa afọ… GỤKWUO
Weebụsaịtị 21 kacha mma iji zụọ ngwa ahịa na akụrụngwa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ inwetakwu ego site n'ịre ụfọdụ ihe gị, ị ka nwere ike inye ha. Ihe ọ bụla ọ bụ, ị nwere ike ịchekwa ego ma mee njem dị ọnụ ala. Nke a bụ nnukwu webụsaịtị na ngwa 21 ị ga-ere ihe ị na-achọghị na mpaghara. 1. Craigslist: Naanị tupu eBay, Craigslist… GỤKWUO
Ụzọ kacha mma iji nyefee kaadị onyinye Visa gaa na akaụntụ ụlọ akụ n'oge dị mkpirikpi
You na-arịọ Kachasị Mfe Ụzọ kacha mma iji nyefee kaadị onyinye Visa na Akaụntụ ụlọ akụ n'oge dị mkpirikpi? Lee azịza na ozi a enyere n'okpuru. Ọtụtụ ndị mmadụ achọpụtala na ịnyefe kaadị onyinye visa na ụlọ akụ siri ezigbo ike na ọbụlagodi ndị mmadụ agaghị enweta ya. Enweghị ike ịgbachitere uru nke kaadị visa,… GỤKWUO
Nkọwa nke ego mbata akwụkwọ na ihe eji eme ya( Income Book Vs Income Taxable)
Kedu ihe bụ Income Book? Ego ụlọ ọrụ na-enweta ego tupu etinye ụtụ isi ya n'uche ka a na-akpọ ego akwụkwọ. (GAAP) bụ ụkpụrụ ndekọ ego anabatara nke ọma, ụlọ ọrụ na-akọ ndị na-ahụ maka ego, ndị na-eketa òkè, ma ọ bụ ndị na-etinye ego na nkwupụta ego. ego ụgbụ ụlọ ọrụ na-ebelata site na ụtụ isi nwere ike ịtu aka mgbe ụfọdụ nke nwere ike jikọta ya na… GỤKWUO
Kedu ihe bụ Mgbasa Bid-Ask Pụtara?
Tupu anyị abanye na nkọwapụta, ka anyị mee ngwa ngwa dokwuo anya ihe Mgbasa Bid-Ask bụ. Ịmara Bid-Ask Mgbasa. Mmekọrịta dị n'etiti Mgbasa Bid-Jọọ na mmiri mmiri. Ihe mejupụtara Bid-Ask Spread. Kedu ihe kpatara ịgbasa mgbasa ozi-ịgbara obosara?. Kedu ihe Mgbasa Mgbasa-Ajụ Dị ka Ọ dị na Ebuka? Bid-Ask Spread Definition Ego nke… GỤKWUO
Kedu ihe dị irè ọmụrụ nwa kwa afọ (atụ na otu esi agbakọ ọnụ ahịa nhata kwa afọ)
Soro usoro na-agbanwe agbanwe nke ịga elu na ala isiokwu a. Ịkpebi na isiokwu a ga-aba uru na ịgụ na nghọta gị. Otu esi agbakọ ọnụego ọmụrụ nwa afọ (EAR) dị irè. Nkọwa nke ọmụrụ nwa afọ dị irè. na-aghọta na ọmụrụ nwa dị irè kwa afọ. Nkọwa nke ọnụma ọmụrụ nwa. Mmasị Maka ma ọnụ na nke dị irè The… GỤKWUO
Ntuziaka maka otu esi emeju nlele
Edebere edemede a ka ị mara ihe bụ nlele, onye nwere ike nwe ego, ka esi ede akwụkwọ nlele, wdg. N'agbanyeghị, enwere ike ịsị na iji akwụkwọ nyocha na-eji nwayọọ nwayọọ na-ebelata, mana ọ ka dị mkpa ka mmadụ mara. ka esi jupụta ndenye ego. Ọtụtụ n'ime ndị nwere… GỤKWUO
Gịnị bụ Pụtara nke Akụ n'okpuru nchịkwa (AUA)
Enwere ike ịkọwa akụ n'okpuru nchịkwa dị ka ọnụọgụ akụ niile nke ụlọ ọrụ ego ga-akwado ọrụ nchịkwa wee na-ana ụgwọ maka ọrụ a rụrụ. Kedu ihe bụ ihe akụ n'okpuru nchịkwa (AUA) pụtara? Ntụle n'etiti AUA na AUM. Ndepụta nke ndị na-enye akụrụngwa n'okpuru nchịkwa akụ ndị a dị n'okpuru nchịkwa na-enwetakarị uru yana jikwaa ya… GỤKWUO
Nkọwa nke akwụkwọ akụkọ ahia
Na webụsaịtị a, anyị ga-enye gị nkọwa zuru ezu nke akwụkwọ akụkọ azụmaahịa na otu esi eji okwu ikpe, Uru nke akwụkwọ akụkọ azụmaahịa, otu esi edobe akwụkwọ akụkọ azụmaahịa dị mma, ihe dị mkpa iji tinye n'ime ọjị ahịa azụmaahịa, ihe dị mkpa iji gbakwunye na ọjị ahịa azụmaahịa. Akwụkwọ akụkọ? Enweghị ụzọ dị mfe iji tụfuo ego mgbe… GỤKWUO
Otu esi edozi na jikwaa Walmart kaadị kredit nbanye na ịkwụ ụgwọ ụgwọ
Nbanye kaadị kredit Walmart bụ ibe ị nwere ike itinye nzere nbanye kaadị kredit Walmart gị iji nweta akaụntụ gị. A na-akpọkarị nke a dị ka atụmatụ nchekwa na-enyere aka ichekwa akaụntụ ndị otu. Na nnukwu, ị nwere ike ijikwa akaụntụ kredit gị wee gbapụta ụgwọ ọrụ kaadị Walmart gị… GỤKWUO
Kedu ihe akwụkwọ ndekọ aha pụtara
Ị malitela azụmahịa ma chọọ ihe ga-enyere gị aka idobe ihe niile. Jiri obiọma gụọ ihe ndị a: Gịnị Bụ Pụtara nke Akwụkwọ Ozi Nlebaanya. Nkọwa nke akwụkwọ ndekọ aha. Ebumnuche nke akwụkwọ ndekọ aha. Akwụkwọ ndekọ ego nke Cryptoglosary. Nkọwa akwụkwọ ndekọ aha. Akwụkwọ ndekọ aha bụ akwụkwọ ndekọ ego na-eje ozi dị ka ihe akaebe… GỤKWUO
Otu ị ga-esi nweta $100 site n'itinye $1,000 n'otu ụbọchị.
Na ibe weebụ a, aga m egosi gị Otu ị ga-esi nweta $100 site na itinye $1,000 n'otu ụbọchị. Anyị ga-atụlekwa banyere ihe ndị a na-ahụkarị na ọtụtụ ndị ahịa na-eme nke ọma, ihe ọmụma atụmatụ ịzụ ahịa, kedu ka m ga-esi mee ka atụmatụ ịzụ ahịa m nwee ihe ịga nke ọma?, Usoro ahia ahia, kedu ka Robo Advisors si arụ ọrụ? Ọnụ ego nke Robo Advisors? Anyị… GỤKWUO
Nkọwa nke itinye ego ego na uru na ọghọm ya
Kedu ihe bụ Capital Investment? Ntinye ego nke ụlọ ọrụ bụ ịzụrụ akụ anụ ahụ maka imezu ebumnuche na ebumnobi azụmahịa ya ogologo oge. Akụrụngwa enwetara dị ka ntinye ego isi obodo gụnyere ụlọ, ụlọ nrụpụta, na igwe. Ego a na-eji nwere ike isi n'ebe dị iche iche, gụnyere ego mgbazinye ụlọ akụ na nzụkọ ego achụmnta ego. … GỤKWUO
Otu esi edebanye aha na ịbanye WALMART kaadị kredit n'ịntanetị.
N'edemede a, ị ga-achọpụta ihe Walmart credit cad bụ ihe gbasara yana Otu esi abanye WALMART CREDIT CARD ONLINE ACCOUNT, URU WALMART CREDIT CARD, Otu esi edebanye aha maka ụlọ akụ n'ịntanetị nke WALMART, gịnị bụ ọnụ ahịa ị nweta ọkụ ọkụ. Kaadị? WWW.WALMART.COM Kaadị kredit Walmart dị mma maka ndị mmadụ… GỤKWUO
Eziokwu gbasara Amazon Store
Ewepụtara ụlọ ahịa Amazon na Septemba 2018 iji nye ụzọ maka obere azụmaahịa na obere azụmaahịa iji ree ngwaahịa ozugbo site na Amazon. Kedu ihe bụ ụlọ ahịa Amazon? Ọnụ ahịa ụlọ ahịa Amazon, usoro iji melite ihu ụlọ ahịa Amazon Otu esi azụta n'ihu ahịa Amazon yana otu esi achọta… GỤKWUO
Categories agụmakwụkwọ football / Soccer Academy, Ntinye ego na ahia ahia, Jobs
Ọnye na-bụ Institutional Investor?
Anyị ga-amụ "Ònye bụ Institutional Investor?". Ọzọkwa, mụọ Institutional Investor, ụdị nke itinye ego na ụlọ ọrụ, ihe egwu nke itinye ego ụlọ ọrụ, Institutional Investors vs Retail Investors: Ọdịiche dị n'etiti ha. Isiokwu a na-ekwu maka imekọ ihe ọnụ ma ọ bụ òtù iwu nke na-ere ahịa n'ahịa n'ọnọdụ ndị ahịa ha nwere ike ịbụ ndị na-etinye ego na-ere ahịa. Anyị na-ezo aka… GỤKWUO
Otu esi esonyere Atlético Ottawa FC Youth Academy
Na post a “Otu esi esonyere Atlético Ottawa FC Youth Academy”, ị ga-amata ntinye chọrọ maka Atlético Ottawa FC Academy, Atlético Ottawa FC Stadium, Onye isi oche Atlético Ottawa FC, yana ọtụtụ ndị ọzọ. Ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Atlético Ottawa FC Atlético Ottawa FC's Youth FC bụ nke raara onwe ya nye n'ịzụlite ihe ọkụkụ n'ọdịnihu nke… GỤKWUO
Categories Ụlọ akwụkwọ football / football na Canada, agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Otu esi esonyere Pacific Football Academy
Na post a “Otu esi esonyere ụlọ akwụkwọ egwuregwu bọọlụ Pacific”, ị ga-amata ntinye chọrọ maka Pacific FC Academy, Pacific FC Tryouts, Pacific FC Stadium, CEO Of Pacific FC, yana ọtụtụ ndị ọzọ. Mmemme ndị ntorobịa Pacific FC Pacific FC's Youth Wing raara onwe ya nye n'ịzụlite mkpụrụ nke ndị egwuregwu n'ọdịnihu. Ịzụ ụmụaka,… GỤKWUO
Otu esi esonyere FK Radnik Surdulica Football Academy
Na post a “Otu esi esonyere FK Radnik Surdulica Football Academy”, ị ga-amata ihe ntinye chọrọ maka FK Radnik Surdulica Academy, FK Radnik Surdulica FC, Serbian SuperLiga, FK Radnik Surdulica player, yana ọtụtụ ndị ọzọ. FK Radnik Surdulica FC Youth Academy FK Radnik Surdulica's Youth Wing raara onwe ya nye n'ịzụlite ebili mmiri n'ọdịnihu… GỤKWUO
Categories Ụlọ akwụkwọ football / football na Bosnia na Herzegovina, agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Ị bụ onye na-eto eto nwere mmasị na bọọlụ Bosnia? Nke a post “FK Sloboda Tuzla FC” ga-enyere aka. Hụkwa ịbanye chọrọ FK Sloboda, FK Sloboda Tuzla FC, FK Sloboda Tuzla FC Stadium, FK Sloboda Tuzla Fc Head Coach. FK Sloboda Tuzla FC: Ụlọ akwụkwọ ntorobịa FK Sloboda Tuzla Youth Wing raara onwe ya nye n'ịzụlite… GỤKWUO
Otu esi esonyere Flamengo RJ Football Academy
Na post a “Otu esi esonyere Flamengo RJ Football Academy”, ị ga-amata ihe ntinye chọrọ maka Flamengo RJ Fc Academy, Flamengo RJ Youth Academy Stadium, Ninho do Urubu, Flamengo RJ Fc Stadium na ọtụtụ ndị ọzọ. Flamengo Youth Academy's Clube de Regatas Clube de Regatas do Flamengo Youth Academy (Brazil Portuguese: Categorias… GỤKWUO
Categories Ụlọ akwụkwọ football / football na Brazil, agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Ịbanye Juventude FC Academy
Ị na-achọ isonye na Academy na Brazil? Ị ga-ahụ na post a "Ịbanye Juventude FC Academy" na-enyere aka. Leleekwa Ịbanye chọrọ Juventude Academy, Otu esi esonyere Juventude Youth Academy, Juventude FC, na Juventude Fc Stadium. Juventude FC: Ụlọ akwụkwọ ntorobịa Juventude's Youth Wing raara onwe ya nye n'ịzụlite ọgbọ ndị ọkachamara n'ọdịnihu. … GỤKWUO
Ị chọrọ igwu egwu maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na Brazil? Nke a post "Ceara Football Academy" bụ ebe dị mma ịmalite. Leleekwa ịbanye chọrọ Ceara Academy, Ceara FC, Ceara FC League, na Ceara Fc Head Coach. Ceara FC: Ụlọ akwụkwọ ntorobịa Ceara's Youth Wing raara onwe ya nye n'ịzụlite ọgbọ ndị ọkachamara n'ọdịnihu. … GỤKWUO
Achọrọ ndebanye aha ụlọ akwụkwọ ntorobịa Coritiba FC
Na post a “Coritiba FC Youth Academy Registration Requirement”, ị ga-amata maka ntinye chọrọ nke Coritiba Fc Academy, Onye isi nchịkwa Coritiba Fc, Coritiba Fc Stadium, na ọtụtụ ndị ọzọ. Sistemụ mmepe ntorobịa na Coritiba Coritiba Football Academy Nka otu ndị ntorobịa bụ otu n'ime egwuregwu bọọlụ ama ama kacha baa uru. Inwe… GỤKWUO
Categories Ụlọ akwụkwọ football / football na Brazil
Otu esi esonyere Goiás Esporte Clube Football Academy
Na post a ”Otu esi esonyere Goiás Esporte Clube Football Academy”, ị ga-amata ihe ntinye chọrọ maka Goias Fc Academy, Goias Fc Manager, Goias Fc Stadiums yana ọtụtụ ndị ọzọ. Ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Goias FC A raara onwe ya nye n'ịzụlite ihe ubi nke ọdịnihu na Goiás Esporte Clube. Ịzụ… GỤKWUO
Soro Forge FC Academy
Ị bu n'obi igwu egwu na Canada dị ka onye na-agba bọọlụ na-eto eto? Mụọ akwụkwọ ozi a "Jikọọ Forge FC Academy". Lelee ịbanye chọrọ Forge FC Academy, Forge FC onye isi nchịkwa, Forge FC Stadium, onyeisi oche nke Forge FC. Forge FC: Ụlọ akwụkwọ ntorobịa Forge FC Youth Wing raara onwe ya nye n'ịzụlite ọgbọ ndị ọkachamara n'ọdịnihu. Agbanyeghị… GỤKWUO
Shanghai Shenhua FC Youth Academy ọnwụnwa
Na nke a post “Shanghai Shenhua FC Youth Academy Trials”, ị ga-amata ndebanye aha chọrọ Shanghai Shenhua FC Academy, Shanghai Shenhua FC Manager, Shanghai Shenhua FC Stadium, na otu esi sonyere Shanghai Shenhua FC Youth Academy. Ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Shanghai Shenhua FC Anyị guzobere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ntorobịa Shanghai na 2012 n'ihi na anyị… GỤKWUO
Categories Ụlọ akwụkwọ football / football na China, agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Ị chọrọ igwu egwu maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na Chile? Lelee post a "Universidad de Chile FC Youth Academy". Hụkwa ịbanye chọrọ na Universidad de Chile Academy, Universidad de Chile FC Stadium, Universidad de Chile FC Manager, Universidad de Chile FC. Universidad de Chile FC: The Youth Academy Universidad de Chile FC Ndị ntorobịa… GỤKWUO
Categories Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ / bọọlụ na Chile, agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Achọrọ ndebanye aha ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Magallanes FC
Na nke a post “Deportes Magallanes FC Youth Academy Registration Requirement”, ị ga-amata ntinye chọrọ nke Deportes Magallanes academy, Deportes Magallanes FC, Chilean Primera división, otu esi esonyere Deportes Magallanes academy, yana ọtụtụ ndị ọzọ. Ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Deportes Magallanes FC iji zụọ ụmụaka, ụlọ ọgbakọ ahụ na-emefu nnukwu ego… GỤKWUO
Otu esi esonyere FK Leotar Youth Academy
Na post a “Otu esi esonyere FK Leotar Youth Academy”, ị ga-amata ntinye chọrọ maka FK Leotar Academy, FK Leotar FC, FK Leotar FC otu na otu esi esonyere FK Leotar Academy na ọtụtụ ndị ọzọ. FK Leotar Youth Academy FK Leotar's Youth Wing na-agba mbọ ịzụlite ihe ọkụkụ n'ọdịnihu… GỤKWUO
Otu esi esonyere NK Široki Brijeg Football Academy
Na post a “Otu esi esonyere NK Široki Brijeg Football Academy”, ị ga-amata ihe ntinye chọrọ maka NK Široki Brijeg Academy, NK Široki Brijeg FC, NK Široki Brijeg FC Stadium, NK Široki Brijeg FC Manager, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke NK Široki Brijeg FC Ndị ntorobịa nke klọb a raara onwe ya nye n'ịzụlite… GỤKWUO
Otu esi esonyere FK Željezničar Youth Academy
Na nke a post ”Otu Iji sonyere FK Željezničar Youth Academy”, ị ga-amata ntinye chọrọ FK Željezničar Academy, FK Željezničar FC, FK Željezničar Stadium, FK Željezničar Manager na ọtụtụ ndị ọzọ. Ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Željezničar (FK Željezničar) FK Željezničar's Youth Wing raara onwe ya nye n'ịzụlite ihe ubi nke ndị ọkachamara n'ọdịnihu. Ịzụ ụmụaka, ndị… GỤKWUO
Otu esi esonyere Reims Fc Academy
Anyị ga-amụ "Otu esi esonyere Reims Fc Academy". Ọzọkwa, leba anya ka esi etinye aka na Reims Fc Academy, ihe achọrọ maka otu esi edebanye aha na Reims Fc Academy, Reims football club, Reims stadium, wdg Ugbu a, ka anyị hụ ka esi esonyere Reims Fc Academy. Okwu Mmalite Ka Stade de Reims FC Youth Academy ị bụ nwata… GỤKWUO
Categories Ụlọ akwụkwọ football / football France, agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Otu esi esonyere Sampdoria Fc League Academy
Anyị ga-amụ "Otu esi esonyere Sampdoria Fc League Academy". Ọzọkwa, mụọ Sampdoria Academy Players, Sampdoria Academy ndebanye, Sampdoria Academy Players, abanye chọrọ n'ime Sampdoria Academy, wdg Ugbu a, ka anyị tụlee otú isonyere Sampdoria Fc League Academy. Banyere Sampdoria Youth Tryouts Ndị otu mmepe ntorobịa Sampdoria bụ ndị otu Primavera 1 mebere. … GỤKWUO
Categories agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Otu esi esonyere Espanyol Fc Academy
Anyị ga-atụle "Otu esi esonyere Espanyol Fc Academy". Ọzọkwa, mụọ ihe ntinye chọrọ ka ị debanye aha maka Espanyol Fc Academy, otu esi abanye Espanyol Fc Academy, Espanyol Youth Academy, Espanyol Academy Training Ground, wdg RCD Espanyol Youth Academy -Centera RCD Espanyol bụ ụlọ ọrụ football ọkachamara na Spain. A maara usoro agụmakwụkwọ ya dị ka… GỤKWUO
Categories Ụlọ akwụkwọ football / football na Spain, agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Otu esi esonyere Genoa Fc League Academy
Anyị ga-amụ "Otu esi etinye aka na Genoa Fc League Academy". Mgbe ahụ, isiokwu ndị mmekọ dị ka; otu esi etinye aka na Genoa Fc Academy, Genoa Football Club, chọrọ ka itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ Genoa Fc, otu esi abanye n'ogige okpomọkụ Genoa, wdg N'amamihe klọb, ha chere na onye na-ajụ ase iweta ndị na-eto eto nwere mmasị maka football ... GỤKWUO
Categories Ụlọ akwụkwọ football / football Italy, agụmakwụkwọ football / Soccer Academy
Page1 Page2 ... Page29 Osote →
Nkà na ụzụ Blockchain
Ụlọ akwụkwọ football / football France
Ụlọ akwụkwọ football / football na Algeria
Ụlọ akwụkwọ football / football na Australia
Ụlọ akwụkwọ football / football na Belgium
Ụlọ akwụkwọ football / football na Bosnia na Herzegovina
Ụlọ akwụkwọ football / football na Brazil
Ụlọ akwụkwọ football / football na Canada
Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ / bọọlụ na Chile
Ụlọ akwụkwọ football / football na England
Ụlọ akwụkwọ football / football na Spain
Ụlọ akwụkwọ football / football Italy
Ụlọ akwụkwọ football / football na China
Ajụjụ Ndị A Na - ajụkarị - FAQ
© 2022 bọọlụ • Wuru na GeneratePress